गुटको भेला गरेपछि चन्द्र भण्डारी समूहविरुद्ध देउवा यसरि भए आगो – Nepal24News
गुटको भेला गरेपछि चन्द्र भण्डारी समूहविरुद्ध देउवा यसरि भए आगो
December 23, 2017 by नेपाल २४न्युज
गुल्मी जिल्लामा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग नराम्रोसँग पराजित भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले गुटको भेला गरेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध गतिविधी गरेको खुलासा भएको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको गुट परित्याग गरेर देउवा समूहमा प्रवेश गरेका भण्डारी प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपछि फेरि देउवाविरुद्ध सक्रिय भएको आरोप लागेको छ । चण्डारीका उक्साहटमा भेलामा आएका युवा नेताहरूले सभापति पदबाट देउवालाई हटाएर नेतृत्व दोस्रो पुस्ताले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बुधबार काठमाडौंमा कांग्रेसका भातृसंगठनका अध्यक्ष र केही युवा नेताहरूको भेला बोलाएर भण्डारीले देउवाविरुद्ध उचालेको स्रोतको भनाइ छ । ‘पार्टी शुुद्धीकरणका लागि बहसको नाम दिएर पार्टी सभापति विरुद्ध चन्द्र भण्डारी लाग्नु भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘एमाले र माओवादीसँग मिलेर ५ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउन नमान्ने । अहिले पराजित भएपछि सभापति विरुद्ध लाग्न मिल्छ ?’
भेलामा भण्डारीले पार्टी सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘हामी सबैको एउटै मत छ । हामी पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छौं ।’
भण्डारीसहितका युवा नेताहरू पार्टी सभापति विरुद्ध लागेपछि देउवाले उनीहरूप्रति कुनै गुनासो नरहेको आफू निकटका नेताहरूसँग बताएका छन् । ‘टिकट पाइन भनेर झगडा गर्ने । टिकट दिएपछि आफै पराजित हुने । हारेपछि मलाई गाली गर्ने ?’, देउवाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चन्द्र भण्डारीहरू एमाले र माओवादीसँग मिलेर बुटवलमा आन्दोलन गरेका होइनन् ? हारेपछि मलाई किन गाली गर्ने ?’
अर्का नेता धनराज गुरुङले पार्टी सक्षम र सुदृढ बनाउन जनविश्वास आवश्यक रहेको भन्दै आफूहरूले विश्वासको मत जुटाएरै छाड्ने बताए ।
भेलामा चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, उमा रेग्मी, नयनसिंह महर, बद्री पाण्डेसहितका एक दर्जन बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
Prevप्रदेशसभाको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक: कुन दलको भागमा कति सीट ? (सूची सहित)
Nextस्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मजयन्तीमा ओलीलाई प्रमुख अतिथिको निम्तो